संसदमा सुनकाण्डकोे प्रवेश, सांसदले सोधे–खोई सुरक्षा ? | गृहपृष्ठ
Home समाचार संसदमा सुनकाण्डकोे प्रवेश, सांसदले सोधे–खोई सुरक्षा ?
समाचार 64 views
संसदमा सुनकाण्डकोे प्रवेश, सांसदले सोधे–खोई सुरक्षा ?
वैशाख ४, विराटनगर । ३३ केजी सुनकाण्डले प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । मोरङ उर्लावारीका सनम शाक्यको हत्या र सुनकाण्डबारे भइरहेको अनुसन्धानबारे प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । माओवादी सांसद कुलप्रसाद सम्वाले सनम शाक्यको हत्या र सुनकाण्ड प्रहरीको हाई कमाण्डसँग जोडिएको बताएका छन् । उनले यसबारे सरकारको जवाफ माग गरेका छन् ।
काङ्ग्रेस सांसद केदार कार्कीले प्रदेश नं १ को शान्ति सुरक्षा खस्किएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । प्रदेशमा पछिल्ला समय अपराधिक घटना दिनानुदिन वढेको भन्दै उनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीले नटेरेको, गाईघाटमा भएको बम विष्फोटका घाइते पारस राईको पैसा अभावमा उपचारमा समस्या भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सांसद कार्कीले प्रदेश संसद भवनका चारैदिशामा सीसीक्यामेराको निगरानीसहित प्रहरी विट स्थापना गर्न समेत माग गरे ।
अर्का सांसद जयराम यादवले भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालयमा भएको बम विष्फोटको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरमका सांसद यादवले बम विष्फोटबारे छानबीन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् ।
मङ्गलवारको बैठकमा सांसदहरुले आफनो क्षेत्रको विकास निर्माण र नदी नियन्त्रण, सडक, शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जवाफ दिंदै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा भएका बम विष्फोट, व्यक्ति लक्षित आक्रमणप्रति प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ३३ केजी सुन काण्ड र सनम शाक्यको हत्याको अनुसन्धान केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयमार्फत भइरहेको उनले जानकारी गराए । घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको र केही नियन्त्रणमा आउने क्रममा रहेको बताए । कार्कीले वालशन्त श्री निवासमाथि गोली प्रहार गरिएको घटनामा हालसम्म प्रहरीले पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको पनि बताएका छन् ।